3 Siyaabaha Ilaah gaalow — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Maxaa yeelay, Ciise keliya sida macallin damiir oo weyn ayaa weli isaga diiday iyo daraaddeed ayaa Ilaah iyagoo gaala ah. Ilaah Dardaarmi aannu ogaanno in Ciise sida Badbaadiyaha dunida oo uu inama bixiyaan wax Waddooyinkiisa kale (John 14:6, Acts 4:12).
Sidaas diiday Ciise waa Ilaah iyagoo gaala ah. Laakiin, sida John 1:12 ayaa sheegay in, "Dhammaan kuwa isaga u aqbal, kuwaas oo magiciisa rumaystay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan.” Qof kasta wuxuu noqon karaa ilmo Ilaah, haddii ay rumaysan lahaydeen Ciise ku dul.
2. Ma qiraya Ciise Ka hor inta Qaar kale
“Sidaas Mid walba oo igu qirta dadka hortiisa, Waxaan sidoo kale ku qiran doonaa Aabbahayga jannada ku jira hortiisa, laakiin ku alla kii igu diida dadka hortiisa, Anna waan ku diidi doonaa Aabbahayga jannada ku jira hortiisa.”
Sidaas waxaa laga yaabaa in aan qiran in Ciise yahay Rabbiga qalbiyadeenna. Laakiin waxaan weli ka gaaloowday karo adiga oo aan ka xishoon isaga ka hor dadka kale. Hadda, waannu oo dhan ka gaabiyeen in Rumaysad noo hor dadka kale galin. Waxaan ku noolnahay dhaqanka ah in uu yahay kordhayso colaaddu dhinaca diinta iyo si gaar ah Masiixiyada. Masiixiyiintu waa rinji sida morons rumeeyey doqon, waxyeello, iyo sheekooyinka bigoted. Tani mararka qaar na waxay keeni kartaa in dib ugama noqon, iyo diidaan inay qirtaan Ciise ka hor kuwa aan qabaa noo majaajiloon doonaa.
Tani waa musiibo ah. Waxay ka dhigaysa Ciise eegi yar iyo waa diidmada ah ee wax kasta oo uu yahay. Laakiin digay, haddii aan go'aansanno in aan Ciise diidi dadka hortiisa, Waxa uu sidoo kale ina diidi doonaa Aabbahay hortiisa. Oo haddii Ciise ayaa sheegay in marka aan ka taaganahay Ilaah hortiisa, "Waxa uu ila,” waxaan ma qaadan in. Jawaabta saxda ah in Masiixu ma aha ceeb ama cabsi, laakiin dhiirranaan iyo xiiso ah in ay isaga la wadaagto dadka kale ka hor.
“Waxay afka ka qirtaan inay Ilaah yaqaaniin, laakiin waxay ka gaaloowday camalka.”
Sidaas waxaa laga yaabaa in markan aad dareento sida wanaagsan quruxsan samaynaya tahay. Waxaad qiran Ciise Masiix sida, oo waxaad ku faraxsanahay in la yidhaahdo in aad tahay Christian a. su'aasha soo socota My idiin yahay, "Maxay noloshaada odhan?” Waxaa suurto gal ah in aannu qaylin ka dushooda saqafka "Ciise waa Rabbi iyo waxaan ahay xertiisa!” weli noloshooda qas sida in hadalkayaga tiimbadeen baxay.
In Titus 1, Paul hadlaa macalimiinta oo ku saabsan been Ilaah diido camalka. Laakiin wax kasta oo inaga mid ah ku noolaan karaan si horjeedda waxa aynu nidhaahno. Rumaysadka Ciise had iyo jeer u beddeli doonaa habka aan ku nool. Sidaas darteed haddii aad nolosha u eg wax ka bedelay, wax aan xaq. Our damaca waa diidmada ah qorshe wanaagsan Ilaah ee rabitaanka galmada. Our kibir wuxuu yahay diidmada ah meel Ilaah ee sida xarunta of waxyaalahan oo dhan. All of our caasinnimada waa diidmada ah ee doorka Ilaah sida xaqa ah Rabbiga barbaariya caalamiinta.
erayada Waxaad qiraysaa laga yaabaa in Ciise, laakiin ha shuqulladiinna ka gaaloowday? Ma waxaad jecel kuwa kale (John 15)? Ma waxaad isaga addeeca (John 14:15)? Ma waxaad midho (Galatiya 5:22-23)? Ma sacrificially aad naftaada iyo siinayo hantida dadka kale (2 Corinthians 8:1-5)? Ma waxaad Ilaah ee Kalimadiisii ​​doonaya?
Qaar badan oo naga mid ah eegi doonaa dhibcood, kuwaas oo qaar ka mid ah arkaan nafteena ka mid ah ama dhammaan oo ka mid ah. Haddii aad dareensan tahay ceeb sababtoo ah siyaabaha aad isaga beeniyay, waxaa jira injiilka. Xitaa diidmada Ilaah ayaa lagu bixiyey at iskutallaabta Ciise, sida aan ku aragno si cad Butros la. Haddii aad dembi in diidmada ka soo noqdaan, oo aad hesho Ciise by iimaanka, dembi in loo cafiyi doonaa.
Ka dhig isku halleeyaa TOD Masiix.
Victor • August 19, 2013 at 8:17 waxaan ahay • Reply
Taas waxaan u baahan yahay. Gaar ahaan Munaafaqnimada “/
Dani • August 19, 2013 at 8:18 waxaan ahay • Reply
Awesome! Mahadsanid Mudane! :)
Thomas Stewart • August 19, 2013 at 8:18 waxaan ahay • Reply
post Wonderful! Waxaa hubaal ah i dhaqaaqay tarjumayaan ficiladooda aniga ii gaar ah. digression Small…aayadda tilmaansado ee Titus waa in 1:16, ma 2:16. Ilaah ku sii karaa in aad isticmaasho nin xoog leh Ilaah!
walaalkiis u fiican Ilaah, Oo anna waxaan xajin isticmaalaya!!!
Guest • August 19, 2013 at 8:19 waxaan ahay • Reply
Waxaan run ahaantii rumaysanahay in Ciise waa Wiilka Ilaah ee dhulka soo diray si mid kasta oo laga badiyay furto. Laakiin in la yiri, Anigu waxaan ahay nooca qofka xishoodaan dadka kale, oo waxaan ka heli sirgaxan ee jeer bulshada oo aan ku lug hadalka ku saabsan Ciise iyo Injiil, iskaba daa sheekada ah in aadan ku lug leh hadalka ku saabsan Ciise, sababtoo ah waxaan u maleynayaa in aan ka baqo ayaa cawaaqibka. Sidee ayaan ka adkaan kara cabsi this? Aayaadka Qaar ka mid ah kuwaas oo caawin doona?
weydoobeen • August 19, 2013 at 8:20 waxaan ahay • Reply
sida runta ah waxaan aadan fahmin waxa aad u jeedo marka ay timaado jeer kuwa marka sheekada waxay u muuqataa inuu ka soo leexdo anti Christian ama diinta maxaa yeelay, waxaan u muuqdaan in ay hesho in badan oo isagoo ku sugan ciidamada. kaliya maalinta kale ahaantii waxaa happend… Kabtanka A ila hadlay oo igu saabsan Shisheeyaha abuuraya dadka dhulka oo uu aaminsan yahay oo ku saabsan. Haddii you'r ma yaqaanaan view this ay timaado on Channel History ka badan (Shisheeyaha Baydka). In kastoo view this waa mid aad u xiiso ii, Anigu taas ma rumaysan inaan aniga qudhaydu. Anyway, Waxaan u muuqdaan in ay u sameeyaan shaqo ok marka ay timaado hadlayay Ilaahanno. Mararka qaarkood waxaan ahay habdhiska, mararka qaarkood aniga ma ahi, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in ay ku hadlaan. Ha lagu dhex ogaado waxa aad aaminsan tahay. Courage sameynayo wax inkastoo aan ka baqaneyno. Si aad u noqoto qof daacad ah gebi ahaanba, in dhamaadka ninkaan iga dhigay inaan eegi qurux doqon. Waxaan ku bakhtiyeen badan, Waxaan halmaamay macluumaad badan oo aan qabo xagga dambe ee madaxayga, oo intay tageen ayay gebi maran. Waxaan dareemay doqon iyo hubi in wax baan fiiriyey oo waxaan ahay doqon. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan sameeyey fiican oo uu ogyahay sida saxda ah waxa aan rumaysan inkastoo igu inaad awoodo inaad kiiska weyn, waayo,. Tani waxaan aaminsanahay in uu qeyb ka yahay sida isagoo Masiixi ah; Cadaadiska. Waxaan dareensanahay inaan dhibaataysnaayeen oo rediculous, laakiin haddii fursad haddana way soo noqdeen inay hadlaan oo ku saabsan Ilaah baan ku dhan mar kale samayn lahaa aawadiis boqortooyooyinka, laakiin i noqon doonaa waqti soo socda diyaar shaki ku jirin lol… waxaana rajeynayaa. Waa dhan ah oo ku saabsan nool, waayo, Ilaah, iyo in Masiixu waxaynu aragnaa in ku nool waayo, Ilaah aan la silcin doonaa iyo harrased. Waxa ugu muhiimsan waa in ay u istaagaan waayo, Ilaah. Waxaan imagin Ilaah wuxuu jecel yahay in uu arko attemt wiil yar oo cabsi inay hadlaan, waayo, Ilaah xaalad hor imaad, markaas arki theologan weyn xidhay oo midkood kastaaba wuxuu Jidka. Waxaan la yaabanahay waxa Ciise eegay sida dadka kale markii uu iskutallaabta dusheeda. Waxaan qabaa doqon haboon lahaa xaq u, maxaa yeelay, wuxuu sheegay in ay Ilaah u noqon, weli dad kale arkay inuu couldnt xitaa qudhiisu caawin off iskutallaabta. Wuxuu eegay doqon dadka kale sidii aan eegay doqon dadka kale ee aan wada hadal la Captian ah, laakiin waxaan la yaabanahay waxa Aabbaha u maleeyeen Ciise iskutallaabta… kuwa kibirka leh waxaan u qaadan.
“Ha affraid kuwa jidhka dila, laakiin aan karin inay nafta dilaan, waxaadse ka. Saas ma aha ee waa la affraid ka mid ah, kuwaas oo burburin kara nafta iyo jidhkaba in cadaabta.”
Hi comment this runtii adeegi igu halkan bishii December ee 2014. Waxaan Ilaah ka codsaday in ay ii dambi dhaaf iyo inay iga caawiyaan in aan ka gaaloowday oo haddii aan abid leeyihiin si ay u caddeeyaan Isagu waa LLord Waxba igama gelin sida doqon waxaan eegi ilaa iyo inta Aabbahay kibir, Waan ku jeclahay CIISE.
TonyStartk • March 5, 2018 at 8:46 waxaan ahay • Reply
Adeeca Thor, ilaaha onkodka.
Mireyjesu • August 19, 2013 at 8:20 waxaan ahay • Reply
1 Corinthians 1:17, Efesos 6:18-20
Guest • August 19, 2013 at 8:21 waxaan ahay • Reply
Mahadsanid, kuwa jira laba aayaadka weyn! Waxaan mahad aad caawimo
Aad ayaad u mahadsantahay for this post! Waxa ay ahayd mid aad u dhiirigelinta iyo halmaaami. Waxaan sidoo kale ku riyaaqay aragti ka comments! Ilaah ha idiin barakeeyo oo dhan! Mahad Masiix King of Kings Sayidka sayidyada,! <3 Daacadii waxaan la dhibtoonayay oo saami ugu. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him first a lot. If I did I wouldn't give in to lust. Waan ogahay waan jeclaan tho. Anigu waxaan ahay Mahadiya! Waan ogahay inuu i jecel yahay! Waan ogahay inuu u dambi ah xataa dembiyadooda oo aan. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. Mararka qaarkood waxaan u malaynayaa sababtoo ah waxaan ka heli xishoon. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. Sidaas ayaan ku heli cabsi iyo aad u hesho xasilloon. I'm sorry I'm making such a long comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! Masiix cafiya! I honestly think I am a bad Christian and sometimes doubt I'm saved. Wax badan ayaa waayadan aawadeed ayaan la soo isticmaalka daroogada iyo la unahay jeeleen waxaana dareemayaa in aan u dhacay. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?
Waxaan couldnt ilmadaydii joojin marka i akhri Dhadkan ku qoran, maxaa yeelay, i ayaa laga yaabaa in beeniyay Ciise la'aan iyo la micno ah Alle ayaan si dhab ah uga xumahay ma'arkin i jecel Ciise oo i rumaysan Runtii Ciise iyo Ilaah iyo i mar dambena diidi doontaa ama ka xishoon in si kasta. Aan weligey xishoon Ciise ay BADAN kaliya in dadka i eegto doqon marka i hadlaan My belive Eebe iyo i dareemi QAABINTA Alle ayaan ama wax iyo in ha iga dhigin doonaya in ay ka hadlaan My belive in Ciise. Taas macneheedu qalad i marnaba samayn doonaa in mar kale i goorna Ilaah iyo Ciise forgivness iyo haatan i beddeli doonaa oo i sidan isaga diidi in si kasta. Waan jeclahay in aad Ciise iyo Ilaah waa idin mahad Alle ayaan Christian iyo Alle ayaan ku faanayaa si. Waad ku mahadsan tahay Flaco iyo jacobp waxa aad labada qoray qalbigayga taabtay si qoto dheer. Rita
@JacobP: Ma hubo hadii cid kale ay jiraan ama uma uu jawaabin su'aashaada dhammaaneysa. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan dareemay keentay in ay ka jawaabaan: samaynayaan daroogada, jeeleen, kibirka, iwm waa caadooyinka ka soo dabeecadda noo dembi miidhan. Waxay yihiin oo dembiyadiinna oo dembi, si fudud u saaray, waa wax Ilaah naga soocayo. Marka Ciise wuxuu u dhintay iskutallaabta, Ayuu badbaadiyey naftayada. John 3:16 timaado ruuxayga. Sidaas, aadna ku badbaaddeen Yacquub. Si kastaba ha ahaatee, shaqada aan loo samayn b / c hadda waa in aan ugu yeedhi Ruuxa Quduuska ah si ay noo dib-u-dhalashada –sida Ciise u warrameen Nikodemos, waxaan waa in mar kale dhalataan. Romans 12:2 Sheegay noo ma u ekaadaan Adduun, laakiin inaad ku beddelma cusboonaanta maankiinna. Oo Galatiya 5:16 ayaa sheegay in haddii aan ku waari Ruuxa, ma aynu damaca jidhka. Sidaas, Jacob, waannu badbaadi doonnaa; Si kastaba ha ahaatee, waa in aan hadda u ogolaan Ilaah in la beddelo caadooyinkii hore noo dembi miidhan, hawadooda, iyo degaa Ruuxa– iyada oo loo marayo Ereygiisa. Waxaan kuwa quduus, nadiifiyey, oo markaan soo maydhay by Masiix (Word nool)- tixraacayo Efesos 5:25-26. Moral sheekada waa JacobP: Haa, aadna ku badbaaddeen. Markaasaa Ciise si qoto dheer wuu idin jecel yahay. Si kastaba ha ahaatee, dembiga ee noloshaada / nolosheena inaga sooci Eebe Xaggiisa ka ahaatay in meelaha kuwa. Waa in aan oggolaado in Kalimadiisii ​​in la cusboonaysiiyo maskaxda maalin kasta oo uu inaga beddesho galay uu image. Waxaan rabnaa in aan ku dadaashaan, Masiix, ma ahan oo keliya dhex shaqeeyey hadal iyo camal–ka qalbiyadeenna. Ilaah si cad waxaad arki karaa iyo gaajo iyo harraad xaqnimo –samayn aan si dhab ah isaga rabto? …Xaqiiqdii waan rajaynayaa in tani ay ka caawisaa mid ka mid ah walaalahaa wiilal ama gabdho aan.
Femi • February 22, 2015 at 7:32 waxaan ahay • Reply
tani waa mid laga cabsado! barakeeyey by this
Kerry • June 1, 2015 at 9:59 waxaan ahay • Reply
gacaliyayaalow My in Masiix,
Waan ku baryayaaye, wax si fiican u socoto oo dhan aad of. Waxaa ii keentaa farxad si ay u arkaan badan muujiyaan dhibaatooyinka nolosha iyo halganka oo maalin kasta in ay ka gudbaan. anigu waxaan ahay ku faraxsanahay inaan arko dad kale dhiiri la Qorniinka iyo waxay jecel yihiin inay u gargaartaan kuwa halgan. Waxaan u maleeyay in dhowr dhibcood hal isticmaali kartaa halka koox si malaha gacan ka-darrada ah ee aan dhan share. Eeg waxa sidan at: waxaan oo dhan waxay leeyihiin nidaam la aaminsan yahay a oo dhan gudaha. Si aad u muujiyaan waxa run ahaantii waa “aad ee” qaadataa geesinimo, laakiin marka ay timaado dadka aad Durid waayo, “waxa ay ka dhigeysaa noo gaar ah”, ma aha run ahaantii aad dhibaato. Ha ka baqin inay sheegaan in hadalka dulmiyaan Ilaah waan jeclahay. waxaa Hayso fudud. Waxaan oo dhan ma noqon karaan sida Paul, laakiin waxaan noqon kartaa sida Andrew. Waxaan helay ilaha jacaylka, Ciise. Waxaan helay waxa ay ka dhigeysaa ii Nabad: Ciise! Waxaa laga yaabaa in marka dadka kale aad aragto nabad ah oo aan ka qayb “Xanta” beddeli doonaa xataa hal qof. Xusuusnow in la ammaano aan dhab ahaantii u doonaysaa waa Ciise ', ma Mans> Ka dhig kor dagaalka, oo waa inuusan marna helo fududahay. Firkradahaan oo dhan oo naga mid ah u wada socdaan , dagaal Dagaalkii wanaagsanaa. Si Ilaah Amaani!
Tani dhab ahaantii i caawiyey gaar ahaan munaafaqnimo sida aan ahay munaafaq ah sidaa darteed waxaan isku dayayaa in la saxo in. Thanks badan for this
Katie • September 18, 2015 at 5:03 waxaan ahay • Reply
@latoyah Austin waxa aad ku qoray waa mid aad run! Ilaah ma noo jecel yihiin oo waannu badbaadi doonnaa. @jacobp Laakiin waa in aynu marka hore ka qiratid afkeenna dembiyadeenna in Masiix (taas waxa laga sameeyaa iyada oo toobad) ka dibna siyaabo noo xumaa ka soo noqdaan (Ezekiel 14:6). Change ma dhici habeenka iyo in toobaddii waa maalin / joogto ah ,laakiin marka aan qalbiyadeenna furo oo aynu ka heli kartaa in Ilaah si aad noogu beddelo Doono. Waxaan Ilaah ka baryayaa in uu Sayidku idin la kulmi doonaa midigta meesha aad ku sugan tahay socod iyo in aad bilaabi doonaan in ay dembi neceb, sidii Masiixa kuwii sameeya. Waxaan sheegi dhiirranaan aad ka badan in marka imtixaanka ee difaacaneysa Masiix agagaarka yimaado mar kale aad la xoojiyo doonaa by Naftiisu inuu geesinimo kaga dhex hadlo! Oo ku caawiyaan dadka kale idinku wareegsan inuu yimaado in la ogaado Masiix (aad la xiriira karaa in ay kuwa ay ahayd meesha aad ahaayeen). Ilaah waa Ilaah istiraatiiji ah oo uusan qalad, halkaas oo wax qaldamaan waa marka aan qabaa inaan ilaah iyo isku dayaan in ay sameeyaan go'aamada our u gaar ah / doorashooyin nolosha. Waxaan rajaynayaa in aad aragto this iyo waa meel wanaagsan hadda. Sidoo kale Akhri Kitaabka Quduuska ah, Ilaah na siiyey tilmaamaha ku saabsan sida in ay ku noolaadaan Axdiga Cusub The (wax walba oo ka dib markii Matthew) waa meel fiican si ay u bilaabaan; ha ku dego iyo waxgarasho ku helaa ka hor inta uusan u dhaqaaqin wax soo socda.
JaniceMNewton • December 7, 2015 at 10:32 waxaan ahay • Reply
Waxaan u leeyihiin in ay Ciise ka baryaynaa inuu ii Dambi Dhaaf , i u diiday in siyaabo ka badan mid ka mid ah Jaahil ah, dareen aan istaahilin dhaaf marka ma ahan oo ku saabsan sida wanaagsan i ahay, laakiinse dhiigga in Ciise ku daatay oo ahaa in ka badan ku filan.
Justin Mkandawire • January 23, 2016 at 5:11 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay caawimada
Timmie • Laga yaabaa 15, 2016 at 10:26 pm • Reply
Thanks for this. Waxaan ahay mar kasto raadinaa siyaabo cusub inay diidi ilaah iyo this article ay aheyd caawinaad weyn ee i siinaya fursado cusub oo caayaya. oo dhan “Ilaah waa xaq quraafaad kale doqonimo dhashay ee bulshada da'da naxaas ah in uunan wax sida caalamka oo dhan si dhab ah u shaqeeya.” hadalka helo jir halka a ka dib. Muddo aan u qasan la “Ma jirto cadaymo ka baxsan qoraalka kitaabiga ah ee jiritaanka taariikhiga ah ee Ciise Masiix, inkastoo shaqo ee gaarka ah Roman Empire ku sameeyey ee diiwaanka lagu hayo.” iyo “Ma jiro qof si ay dib ugu noqdaan magaalada waxay ku dhasheen for tirakoobka ah iyo in ay bixiyaan canshuur ay. Romans The jeclaan lahaa in la ogaado meesha qof ayaa haatan ku nool oo halkaas doonayay dakhliga canshuurta. Socdaalkan waxa uu Beytlaxam waa qalab suugaanta horumariyo ka dib markii xaqiiqada ah si ay Ciise’ goobta dhalashada iyadoo Jilib Xidhan la sii sheegidda hore. Sidoo kale, Romans lahayn diiwaanka tirokoobka dambe oo caynkaas ah ama canshuur.” khudbado laakiin xitaa kuwa aad u hesho daal ka dib markii dhowr jeer darsin ah iyaga soo noqnoqda in dadka aan lagu wareeriyay kartaa in aad ka fikirto naftooda toban ilbiriqsi. Sidaas mar kale, waad ku mahadsan tahay ii la siinayo siyaabo cusub oo inventive in la diido jiritaanka aad abo Samada aan la arki karin. Waxaan si buuxda u mahad!
James Ushie ago • June 18, 2016 at 5:06 waxaan ahay • Reply
I Love Tani; Dambiilayaale; waxaan ku khasbannahay in Amead Siyaabaha Our.
LamarHayes • August 14, 2016 at 5:30 waxaan ahay • Reply
Timmie : “Socdaalkan waxa uu Beytlaxam waa qalab suugaanta horumariyo ka dib markii xaqiiqda ah” … Really ? runtii Waxaad rumaysan tahay ? Just hal su'aal, 4 erayada … “waxa haddii aad qaldan tahay”.
maxaa jira, haddii qof ayaa Christian ah noloshooda oo dhan, lagu baabtiisay, mucjisooyinka arkay dhici, iyo si ka badan ka dibna been qof sheegi leh “Ma dhihi lahaa Christian waxaan ahay laakiin waxaan aaminsanahay in awoodda sare”.. Ilaah u dhaafi iyaga?? haddii ay si dhab ah u dareento xun iyo toobad keenin ku saabsan?
Haa uu doonayo. Ilaah fahamsan itaaldarradeenna. Qofkaas oo keliya u baahan yahay si uu u noqdo unashamed ee Injiilka. Ilaah u muuqataa koritaanka joogta, ma kaamil ah dumaya.
Brucid • October 14, 2016 at 5:19 waxaan ahay • Reply
Read kitaabkii 2 Corinthians 5:17-19
Read 1 YOOXANAA 1:9 sidoo kale.
Xusuuso: 6 of 3.14 – Musqusha The Last Paper Roll
Dennis • November 10, 2016 at 1:17 waxaan ahay • Reply
Waxaan qabaa inaan shan beeniyay Jeseu shuqulladaydaan (Munaafaqnimada) laakiin mahad ilaah for qurxiyo on iskutallaabta.
Raadinta runta. Thanks
Daniel • February 15, 2017 at 1:15 waxaan ahay • Reply
Waxaan ahaa Christian iyo maankayga ka qaaday in meesha aan bilaabay in ay u maleynayaa in qalad ah Ilaah iyo u maleeyey inuu la ii soo diro si uu doono oo uu u maleeyay doonaa joojin lahaa si aan u maleeyay in ay ahayd isaga ka tilmaansataan aan aqbaleen waxaa socday oo ku hanjabay Ilaah dudumiyo ganacsiga iyo is oo qalbiga ka dibna sii qallafiyey ka gees ah Ilaah iyo iimaanka bidix. Thenot Ilaah baa ii soo baxay qoyska iyo Ciise wuxuu ku yidhi ilaa Wasiirka separation ka timaada Ilaaha hadda iyo kuwo waara. Waxaan doonayaa in aan dib sidaad nolosha qaadan laakiinse iyagu ma ay diyaar u yihiin in ay dib ii qaado. Help fadlan
Rickylee • April 20, 2017 at 7:28 waxaan ahay • Reply
Waxaan Ciise Masiix; Waxaan ahay Mu'min Bible a, Anna waan ku qiran boqorkii boqorrada iyo Sayidka sayidyada, isagu waa!
OdioEmmanuel • Laga yaabaa 7, 2017 at 3:33 waxaan ahay • Reply
Waxaa laga yaabaa in magiciisa lagu ammaano weligiis
JaketaFenner • Laga yaabaa 13, 2017 at 10:55 waxaan ahay • Reply
Mudanayaal hi! Ciise waa Rabbi! Ciise ayaa noloshayda agagaarka, Kol dambe ma masturbater a, magaabay wiil(is-waxyeello), cagajuglaynta, cadowgayga, iyo wax walba oo aan Naceen qudhayda. Waxay qaadataa badan oo loogu talo galay dadka qaar ka mid ah, in la yidhaahdo oo ku saabsan wixii aan idhi, Nasiib wanaag, ii Ma sameeyey, maxaa yeelay, Ilaah iigu dambi dhaafay dembiyo kuwaas oo aan ka xishoon u sheegin qof kale sababtoo ah ma aysan waxba ku qaadan at dhan igu odhan ma ihi oo aanan rabin qarsoon aan u noqon turunturoodo ugu a qof. Waxaan jeclaan lahaa in dadka u sii Rabbiga la aan loo eegayn waxa ay qaadanayso iyo weyddiiyaan oo ku yidhaahdaan inuu idin samatabbixiyo oo dembiyadiinna oo kasta iyo in aad noqon doonaa doonista Rabbigu ku! Mahadsanid, Ilaah aad naxariistiisa iyo nimcadiisa! mawduucan (3 siyaabood oo Ilaahiinna u inkirin) wuxuu ahaa mid wax tar leh, sababtoo ah waxaan kor u baadhay on google on “sida aan qirayaa kartaa Ciise more” sababtoo ah waxaan doonayaa dadka inay ogaadaan Ciise waa Rabbi wax walba oo aan doonayaa in aan wax dheeraad ah oo dheeraad ah ku samayn waayo, Rabbigu kanna waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee. Waxaan ka xishoon Rabbiga ma ihi oo anna waxaan isaga u adeegi doonaa inta ka dhiman ama noloshayda ilaa aan dib ugu ciidda leexdo. Maalin weyn, waxaana rajeynayaa this post caawisaa qof halkaas! Waxaa jira xoog magaca Ciise, mahadsanid Sayidka!
Sidee i dhaaf heli diiday ilaah?
NormanBerry • October 15, 2017 at 10:21 waxaan ahay • Reply
Iyada oo laga jawaabayo Yacquub. Waxaan kaliya doonayaa in la yidhaahdo oo aanan haysan Qorniinku ku qoran laga heli karaa ii xilligan. Laakiin waxa ay u muuqataa sida haddii aad waa dildillaacsan yihiin dhexeeya Ruuxa Quduuska ah iyo waxyaalaha dunida this. Ma qaadaaya aad on this waa uun waxa u dhexecya dhimanaya ee Ilaah abuurka waayo-aragnimo oo dhan. Waxaa jira maris ah Qorniinku halkaas oo nin weydiin Ciise waxa waajib ku ah inuu yeelo inaan ku badbaado iyo Ciise u sheegay inuu “naftaada u diidi, soo qaato oo aad iskutallaabta , ha i soo raaco.” Brother, in uu culus yahay! Waxaan ognahay meel kitaabkii Mark Ciise ayaa sidoo kale sheegay “in haddii aadan soo qaato oo aad iskutallaabta ha i soo raaco in aadan ahayn, ima istaahilo”. Ha Waxaan dareemayaa sida inaan sameeyo? In dabeecadda aan dhimanaya aanan samayn. Sida aan ka bartay Qorniinka iyo sawir cad oo ku saabsan jacaylka Ilaah iyo allabari oo wuxuu ka dhigay in na la abuuro ka dibna noo ogolaanaya xoriyadda ka mid ah doorashada isaga oo jidkiisa ama aan doorashada ka dibna isagoo Wiilkiisa in noolaa Dad nolosha nala gudo oo kaliya in ay isaga u ciqaabay illaa dhimasho sababtoo ah times kuwa marka aan aan Ilaah raacaan, ka dibna waxaan aaminsanahay waa u qalantaa ii tahay in la raaco waxa uu ku amray. Tan iyo markii aan ka yeesheen edbinta xagga Ciise iyo codsatay in ay ku nool aan maalin aan isku arkin inaan dhibane dunida iyo nolosha this. Waxaan dareemayaa inaan ujeeddo ku nool iyo inaan anigu ahay qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha addunyo kastoo Waxay u ekaan kartaa yar. Ilaah ayaa ii barakeeyey waxbarashada iyo waxaan jeclaan lahaa in la yidhaahdo in waxgaradka in sayniska MA cadeeyo Abuuraha rabaani ah. Abuuraha Tani kuma koobna xadka of jidh dhimanaya u nahay midna waa uunka Ilaah laftiisa. Aynu eegno at Einstein. Waxaa wax laga xumaado, isagu ma uuraysan karaa in qof rabaani ah abuuri kartaa wax kasta oo ka jira, weli Einsteins natiijooyinka cadeeyay in arrinta oo dhan waxaa laga sameeyey tamarta. Energy ma aha walax laakiin waa ciidan. Haddaba sida ciidan la si gaar ah loo sameeyay karaa walxaha iyo qaar ka mid ah walxaha kuwa noqon abuurka nool a. Waxaa jira cadeyn in ay jiraan waa Ilaah koonkan iyo waxa aan keligay ma tagay silco oo ka dhiman wakhtiga ammaantiisii ​​oo aan micne lahayn. Ilaah wuxuu leeyahay filayo sare oo naga mid ah. nolosha Tan waa baaritaan iyo waa in aan gudbo imtixaanka la tilmaamaha uu ina siiyey.
wow this waxaa si qurux badan runtii waxaan jecelahay in aan jeclahay waxaa aad baad u mahadsan tahay erayga this ilaah mahadsanid
Mathew • November 14, 2017 at 8:20 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay walaalaha for this post. Mar kasta oo aan ahay silcin / xadgudbo(this bilaabay caruurnimada oo dhacaya iyo wixii ka dambeeyey) Waxaan bilaabay neceb CIISE Magaca. Sidaas daraaddeed xataa ka dib markii mar kale dhalan , Anigu waxaan isaga ku dafiray midkood iyada oo mid ka mid ah saddex ku xusan iyo tiirarkeeda. Xitaa ka dib markii wax qiranayay, qalbigayga jiro nacayb dhinaca Magaca Ciise in kastoo aan doonayo in aan isaga raacaan oo isaga jecel. Waxaan ahay la dhibtoonayo. Taasi waa sababta aan bilaabay Boogaadin sida loo qirayaa Ciise Name ama sida ay u ka yimid isaga ku dafiray baxay. Waxaan arkay blog this ee website-ka. Waad ku mahadsan tahay la wadaago. fadlan i baryi karin oo Ciise Masiix celin Taan jeclahayay ugu horeysay oo ku sii jacaylkiisa xataa jidhka, ruux, nafta iyo dareenka si aanan isaga diidi doonaa ilaa aan dhimasho ama uu socda labaad ?
Waxaan u malaynayaa in Ilaah ka badan ayaa xiiseynaya waa haddii aan jecel in deriskiisa naga speechs wax alla wixii aynu ka dhigi. Naagtii ayaa u xarkaha ee aan diinta ka ahaa mid aad u jecel oo waxay had iyo jeer ku siin lahaa credit in Ilaah, laakiin waxay mar walba oo keliya kala hadli doono sidii wax in ay si joogto ah barbaro on. LAAKIIN, influencer weyn ahaa intee ayuu la eg oo iyana waxay ahayd. In noloshayda hore ee sida Alla ah, erayadii dadka lahaa muhiimad saameyn iguma on. Waxay ahayd ay falsayeen. Sidee jecel, waxay ahaayeen, sida naxariis, sida aqbalay. Waxaan xirtaan Cross a on silsilad runtii gaaban. (sheeko funny. Waxaan amar ku silsilad dheer in mail si aan Cross la qarin lahaa si aan u lahaa ma "xumayn". Cross ayaa in gaaray mail ah "qalad" ahaa gaaban ka badan waxa aan lahaa lahaa ka hor inta! Heshay fariin ah Sayidka!) Sidaas daraaddeed waxaan soo xirtaan in silsiladda gaaban iyo QOF arki karaa waqti Cross oo dhan. Laakiin su'aasha weyn hadda waa, anigu jecel. qof walba ayaan u daweeyo, sidii ilmo oo uu Ilaah jeclaaday? Waxaan diidi Ciise by iska dhego-gaajaysan, maxbuuska, dadka bilaa guryaha ah. Ciise wuxuu ku yidhi nadiifi koobka gudaha iyo inta ka qaadan doonaa daryeelka laftiisa haddii. Ma uusan jeclaan dadka tukashooyin dhaadheer si ay u muuqdaan kuwo fadli badan yahay waxaad. Haddii aan jacayl Masiixa ee qalbigayaga oo wuxuu oofin camalkooda jecel, waxa aan ku wacdiyey Ciise
Marka laga Jacobs oo ay weli waxaan cafiyan? Kitaabka Quduuska ah waxaa ka buuxa sheekooyin dambi dhaaf. Fiiri David yaa dembaabay iyo dembaabay iyo dembaabay. Fiiri Peter Beeniyey Ciise 3 jeer oo waxaa looga dhigay madaxa Kaniisadda. Adigu hadda waxaad tahay ilmo Ilaah. waalidka wanaagsan ma ka tanaasulaan ilmahooda si fudud maxaa yeelay, iyagu waa waxmatare? Dabcan maya. Tani waa ilmahaaga. Intee ka sii badan samaawi ah Aabbeheenna. Waxa aan ahaa koodii ugu Ciise ka soo horjeeda in ay aad u badan sida kuwa kibrana. Ka fikir Farrisiga oo ku tukanayeen, Rabbiga waad ku mahadsan tahay ma hoosaysiiya iiga dhigaya sidan cashuurqaade dembi leh. Waxa uu ahaa ma badbaadi. Laakiin hooseeyana cashuurta kuwaas oo laabtiisa ayuu garaacay, Ciise si fudud u dhaafay. In aan nolosha Salaadda gaar ah, Waxaan la kulmaan in Ilaah noo jecel yahay si aqlabiyad. Si uu u egtahay in ay diiradda saaraan waxa aannu ku samayn xaq halkii ay qalad ah. Inuu aad is-hoosaysiiya waa (waa in aynaan la yaabin. Waxa uu u doortay inuu u dhalan qabaal ah iyo nolol saboolnimada). Waa ku dhowaad sida aad buu u mahad celinayaa marka aan doortay in uu waqti la qaato Salaadda iyo doonistiisa doondoonaan. Isagu waa ogyahay in aan xor u tahay ma ay doondoonin isaga. Sidaas marka aan si daacad ah isaga doondoona ha isagu waa mahdisaan ood ka maqsuuday dadaalka aan ugu jirno. Marar badan waxa Aannu waa kuwa Ilaah ku hardiyi sababtoo ah iska waxaan qabaa hal ma nagu jecel laga yaabaa in badan. na in badan ku cafiyo. Laakiin isagu ma aha ninba ah ayaa loo gudaa Ilaah. Dhammaan shaqaalaha ee aad isku bixisay in ay maalintii oo dhan soo shaqeeyay ama in saacaddii u dambaysay. Waxa uu had iyo jeer diyaar u yahay inuu aad u soo qubaa la jacaylkiisa, haddii keliyahoo aad ha doonaa.
u mahad celineynaa wax walba
Ogaanshaha in waan ku dembaabay waa anshax xumo. Markaasay rasuulladii waxay inoo rajaynayaa siin, Masiix. Waxaan mar walba farxay in pecuilar ah.
Nixar • Laga yaabaa 4, 2018 at 1:09 pm • Reply
Waxaan la qorsheeyay in this wadaagaan xubnaha aan la shaqayn jiray kooxda cibaadada sida waanada for caabuddaan hortooda our dhaqanka.
Laakiin waxaan dareemay eed ku saabsan waxyaabaha kuwan. Waxaan ula jeedaa weli ay jiraan wax aan u baahanahay in ay toobad keenaan oo ah– iyo in la ii diido isaga PF unnoticeably waqtiyada.
Aabbaha fadlan ii dambi dhaaf dembiga iyo Ii hoggaami waddooyinka xaqnimada aad. Aamiin.
Joe • Laga yaabaa 24, 2018 at 7:51 pm • Reply
Waxa aan mar walba dhihi marka qof uu bilaabo wacdiyaya oo dhan waa Masiixiyiintu waa Nacasyadu & maalin maalmaha ka mid aynu wada oga doonaa kaliya riyo waa…
Waa hagaag, haddii si sax ah ( taas Anigu ma aaminsani aad tahay) Us Masiixiyiinta ah ku noolaa & jeclaaday waxa aan rumaysan .
Dhinaca kale, haddii wixii aan Masiixiyiinta ah waxay aaminsan yihiin waa run
(Oo aan si dhab ah u rumaysan tahay in Ilaah & Wiilkiisa Ciise waa dhab)
Waxaan dhamaanteen uu arki doono markii maalintii yimaado. Maalintaas waxaad doono in ay aaminsan yihiin, laakiin waxa ay noqon doontaa goor dambe kuu. Waxaan Saar aan Case.
Sidaas daraaddeed u maleynayaa in ku saabsan.
Waxaan dareemayaa inaan ka xishoon in i beeniyey sababta ilaah i isaga ku eedeeyaan aan moma geeri iyo im xishood in aad la hadasho qof oo im cabsi ay sii socotay inay aruge i ama erayadayda kula jirteen ka soo baxay midig laakiinse i jeclahay chirst ciise walaalkiis iyo Aabbihiinna jannada ku jira iyo i rumaysan in ilaah in wiilkiisa uu ka dhintay iskutallaabta dusheeda dembigayaga, waayo cid diray oo i ha rumaysan isaga im badbaadiyey iyo i helay baabtiisay iyo i rumaysan in uu hadalkiisii ​​laakiin i ugu horeysay ku riday i baahan tahay caawimaad si aad u hesho of my scaredness iyo affarid iyo xishood yall ii caawin kartaa oo aad baad u mahadsan tahay, waayo, waxaan u baahan tahay aabbahay haddii i abid beeniyay horay isagoon falalka aan dhaqsaha aabbihiis xumahay pls cafi ii adiga iyo magaca Ciise jecel aamiin
Rajaynaynaa in this ka caawisaa Catherinemeadows
Miyaanan idin amray? Xoog yeelo oo aad u dhiirranow; ha ka baqin, hana qalbi jabina, waayo, Rabbiga Ilaahiinna ahu wuu kula jiraa meel kastoo aad tagtidba. " (arki Kitaabka Quduuska ah, Joshua 1:9)
Maanta, Rabbigu wuxuu leeyahay, si aad u, "Si wanaagsan u dhiirranow!"
"Markaasuu wuxuu ku yidhi, "Ninkii aad loo jeclaayow, hana cabsan! Nabadi ha idinla jirto; xoog yeelo, haa, xoog yeelo!"Haddaba markuu ila hadlay ayaan xoogaystay, oo wuxuu ku yidhi, "Sayidkaygiiyow, hadal, waayo, waad i xoogaysay. "" (arki Kitaabka Quduuska ah, Daniel 10:19)
Qalbigaagu u xumaaday? Kalsoonaada…Ilaahiinna ah ayaa halkan jooga!
Mid ka mid ah kuwaas oo ay ina siinaysaa nabad buuxda ina siinayo.
Kuwa indhaha ay go'an on Ilaah iyo u Ganacsigiisa lagu xaqiijin karaa in wuxuu idinka qaadan doonaa daryeelka ee kooda.
Waxa uu kan Eebay Caddaalad.
Waxa uu kan bixisaa.
Mid ka mid ah kuwaas oo uu kuu sheegayaa in ay si wanaagsan u dhiirranow waa ka itaal badan waxa aad niyad.
Kitaabku waxa uu mar kale sheegay in, "Laakiin hadda, Rabbigu wuxuu leeyahay , kan idinka abuuray, Jacob A, Oo kan idin sameeyay, O Israa'iil: "Ha ka cabsan, waayo, waan idin soo furtay; Waan idiinku yeedhay magacaaga by; Anaa ku leh. Marka aad dhex mariyey biyihii oo, Anna waan kula jiri doonaa; Oo markaad webiyaasha dhex, sow iyagu wax kuma qarqin doonaan. Marka aad ku socotaan dab dhex marisaan, waxaad doontaa in aan la gubay, Mana ololkii meesha aad gubto doonaa. "" (Ishacyaah 43:1-2)
si wanaagsan u dhiirranow, Catherine. Kuwa aad ku xeeran laga yaabaa in aadan aad u ogaato, laakiin Ilaah magacaa kuugu yeedha by ...! Waxaad tahay uu. Eebana waa idinla joogaa, xataa inuu dab ku maxkamadda iyada oo loo marayo. Isaga by dhinaca, aad marna kali noqoneeyn. Kalsoonaada!
site waxay igu caawisaa mucjiso A maalin kasta Jesus.net
Thanks Sayidow badan, run ahaantii waxa ay iga dhigaysaa in la ogaado meesha aan joogo in Rabbiga oo i leeyihiin in ay sii wadaan shaqada waayo, badbaadintaydu.
Laga yaabaa • January 26, 2019 at 5:04 pm • Reply
i caawi fadlan, kaliya diidi Ciise, Ilaah i bogsiiyey markii aan ahaa 10 sano, Wuxuu iga soo kaxeeyey dhillaysi, Wuu i qaaday, oo ceelkii ka dhowr jeer, Waxay leedahay yabooha weyn ee noloshayda oo aan kaliya u diidi, hal jaalle anigaa of weydiiyay hadii ay run ne MAXAY ayaa faallo ka ahaa, Waxaan ahaa evangelical hadda, Waxaan ka xishooday inuu igu majaajiloodo, waayo, ee la soo dhaafay iyo Ciise Beeniyey oo hadda waxaan dareemayaa xun. :(
Ronald • Laga yaabaa 3, 2019 at 10:46 waxaan ahay • Reply
Waan ogahay in Ilaah siyaabo badan dafiri,tan iyo markii aan akhriyey this article leeyihiin si ay u sameeyaan,wax xaq
Joseph Sabiiti • June 17, 2019 at 9:25 waxaan ahay • Reply
Aad dhiirigelinayaa. Waxaan isku diyaarineysa fariin ku saabsan 3 Iyadu jidadka Ilaah loo diido oo aan ka helay aad website aad u waxtar iyo talo soo jeedin.
Tracy • June 23, 2019 at 11:58 waxaan ahay • Reply
Mararka qaarkood waxaan u malaynayaa in Ilaah wax oo dhan waxay ahayd oo kaliya si ay u naga dhigaan fiican sababtoo ah hoos waannu og waana dhimaneynaa qaarna tageen for daa'in. Waxay ka dhigaysa mid si cabsi badan igu niyad-. Laakiin dadka ku dhintay muuqan weligiis tegey oo waxa ay u muuqataa sida oofinta doonayo in doonayaan in ay mar kale arkaan. Life u muuqataa wax aan waxba tarayn iyo qaar badan oo rumaystay. Qaar ka mid ah maalmaha waxaan rumeeyey, qaar ka mid ah ay yihiin times of quusan. Waxaan akhriyey iyo ka baran riteen. Anigu ma waxaan ahay Qaddarray cadaabta ama waa waxa dhabta ah?